Filannoo Keenyaa: Meeshaan sirni sagalee kenniinsaa filannoo lammataaf 'hin qaqqabu' - BBC News Afaan Oromoo
Dursaan mormitootaa Raayilaa Odiingaa Hagayya darbe mana murtiitti milkaa'anii turan
Filannoo pireezidaantummaa irra deebii Keenyaatiif dhaabbanni meeshaa sirna sagalee kenninsaa dhiyeessu, meeshichi yeroo jedhametti akka hin geenye himeera. Kunis yeroo karoorfameetti filannichi akka hin gaggeeffamne gochuu mala.
Manni Murtii Olaanaa Keenyaa filannoo ji'a darbe rakkoo irraa bilisa hin turre jechuun haqee ture. Filannoo sana Pireezidantii biyyattii kan turan Uhuuruu Keeniyaataatu injifate ture.
Dhaabbanni Firaans OT-Moorfoo, filannoo Onkololeessaa irra deebiin gaggeefamuuf meeshaa sirna sagalee kenninsaa baay'ee wal-xaxaa ta'e irra deebi'ee diriirsuun barbaachisaa dha jedhe.
Haa ta'u malee hojii ijoo barbaachisu yeroo jedhame keessatti raawwachuun hin danda'amu jedheera.
Falannoon irra deebii Onkolooleessaa duubatti harkifachuu mala odeeffannoon jedhu kan dhufe, ega Ejansiin oduu Royitaris xalayaa dhaabbanni OT-Morfoon komishinii filannoo biyattiif barreessee argatee booda. Akkasumas duubatti harkifannaan jiraachu akka danda'u qondaalli filannoo biyyattii BBC'f mirkanesse jira.
Xalayaan Fulbaana 18tti barreefame akka jedhutti sirnooti elektironikaa kenniinsa sagaleetiif itti fayyadamame lama filannoo irra deebitiif irra deebi'amee diriiruu qaba.
Koompitaroonni taabileetii 45,000 ol filannoon dura, filattoota barruu qubaa yookin ashaaraa fi suuraatti fayyadamuun akka ittiin adda baasaniif qondaaltoota filannoo keenyaatiif kennamanii turan.
Taabileetonni kunneenis qabxii filannoo amansiisaa dabarsuuf murteessoo ta'usaanii, kaampaanichi ibsa Eebla darbe kenneen himee ture.
Rakkoolee irraa bilisa ta'uu dhabuun qabxii filannoo dabarfamee sababoota Manni Murtii Olaanaa ji'a darbe filannicha ittiin haqe keessaa tokko ture. Gabaasni guutuun mana murtichaa garuu kamisa dhufu ifa taasifama jedhamee eegama.
Rakkina teknoolojiitiin maddiittis, Pireezidantii biyyatti aangoo irra turan Uhuuruu Keniyaataa waliin kan dorgoman dursaa paartii mormitootaa Raayilaa Odiingaan, qondaalonni komishinii filannoo biyyattii yoo jijjiiraman malee filannoo dhufu irratti hin hirmaadhu jedheera.
Komishinichis rakkoolee jiran irratti filannichaan dura kaadhimamtoota lamaan waliin marii'achuuf sagantaa qopheesse akka jiru gabaafameera.
'Nama kan nama taasise' uqqubiin amma karaa dijitaalaa dhufeera
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Muddee 2018